Tovovavy ofisialy amin'ny Andro ICT: Miresaka amin'i Fran del Pozo izahay, avy amin'ny Code.ORG | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 22/04/2021 13:47 | General, About us
Androany 22, 22 aprily, nankalazaina ny andro iraisam-pirenena ofisialin'ny zazavavy amin'ny TIK, andro iray lehibe raha raisintsika ny banga lehibe eo amin'ny lahy sy ny vavy izay mitranga ao amin'ny tetezamita nomerika sy ny fandaharana, izany no antony tianay holazaina aminao hoe inona no fehezan-dalàna an'ny. ORG sy ny fomba anampiany ny ankizivavy an'arivony maro eran-tany amin'ny faritra rehetra ao an-trano hahalala bebe kokoa momba ny teknolojia vaovao ary indrindra ny fandaharana. Niresaka tamin'i Fran del Pozo, lehiben'ny Code.ORG any Espana izahay.
Ao amin'ny Actualidad Gadget, mahatoky mandrakariva amin'ny etika fanonta anay, dia miroso amin'ny fandikana ireo fanadihadiana natao izahay.
Amin'ny inona? Oviana ny Code.ORG no nanapa-kevitra ny handray anjara amin'ny fizarazarana nomerika eo amin'ny tanora ary ho anisan'ity tetezamita ity?
Code.org dia teraka tamin'ny 2013 tany Etazonia niaraka tamin'ny iraka fa ny ankizy tsirairay amin'ny sekoly rehetra eto amin'izao tontolo izao dia manana fotoana hianarana kaody.
Modely fahombiazana voaporofo. Maherin'ny 40% ny mpianatra any Amerika Avaratra no manana kaonty ao amin'ny Code.org, ary koa mpampianatra 2 55MM sy mpianatra XNUMXMM manerantany (antsasak'izy ireo, vehivavy).
Ny tetik'asa dia tarihin'ny mpitondra manerantany, politika, sosialy ary toekarena, toa an'i Bill Gates, Jeff Bezos, Satya Nadella, Eric Schmidt, Tim Cook, Barack Obama, Bill Clinton, Richard Branson, BONO, na ireo dekano ao amin'ny Oniversiten'i Stanford, Harvard na ny MediaLab an'ny MIT ankoatry ny maro hafa ... ary mamatsy vola ny sasany amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany, toa ny Google, Microsoft, Amazon, General Motors ary Disney.
Ahoana ny fiasan'ny Code.ORG hanampiana ny zazavavy tanora hianatra fandaharana?
Miaraka amin'i Khan Academy, izahay no sehatra fampiofanana lehibe indrindra eto an-tany amin'ny isan'ny mpampiasa. Manana atiny maimaimpoana nadika tamin'ny fiteny 60 mahery izahay ho an'ny mpianatra 4 ka hatramin'ny 18 taona. Ankoatr'izay, manao fampielezan-kevitra tsy tapaka izahay hampiroborobo ny fidiran'ny tanora amin'ny programa.
Ny tena mampiavaka antsika dia sehatra iray misokatra tanteraka sy afaka amin'ny toerana rehetra eto amin'izao tontolo izao isika. Ny atiny dia natao hampiofanana zazalahy sy zazavavy hatramin'ny mbola kely, (40% amin'ireo mpianatra amerikana amin'ity sokajin-taona ity dia mpampiasa ny Code.org) miaraka amina taranja samihafa arakaraka ny taona ianarana. Etsy ankilany, natao ho an'ny mpampianatra ihany koa izy io, ho mpamatsy fampiofanana lehibe indrindra ary fitaovana hampivelarana ny fandaharam-pampianarany. Raha fintinina, ao amin'ny Code.org izahay dia mampiroborobo modely mirindra sy tsy miangatra, ho an'ny rehetra, amin'ny tanjona ny hanafoanana ny fampahalalana, ny lahy sy ny vavy ary ny elanelan'ny fifaninanana mety misy.
Inona? misy ifandraisany amin'ny asanao sy ny hoavinao manokana ve ny fandaharana?
Amin'ny lafiny iray na amin'ny fomba hafa, ny asa rehetra dia hifandraika amin'ny teknolojia sy ny informatika. Na izany aza, tsy fantatry ny ankamaroan'ny mponina ny atao hoe programa sy ny lanjan'izany ho an'ny ho avin'ny zanany. Raha ny marina, ny fampianarana siansa informatika dia zava-dehibe amin'ny ho avin'ny tanora sy amin'ny fifaninanana Espaniola.
Izy io dia lakilen'ny fampifanarahana fiofanana amin'ny asa araka ny ataon'ny toekarena manavao indrindra an'izao tontolo izao.
Inona araka ny hevitrao no antony mahatonga ny isan'ny vehivavy mandalina sy manokan-tena ho amin'ny siansa sy ny haitao informatika nihena tao anatin'ny tontolo iray niomerika?
Heveriko fa misy olana stereotype izay tena ilaina tokoa handravana ny fahasahiranan'ny asa ara-teknika sy ny tsy fahampian'ny fahaizan'ny vehivavy. Raha ny kolontsaina, dia takatra fa ny asa sarotra indrindra, izay mitaky fanoloran-tena sy ezaka bebe kokoa, dia tsy natao ho an'ny vehivavy ary izany no antony nanoloran'ny fianakaviana ny zanak'izy ireo vavy hifantoka amin'ny sampana sosialy siansa, toy ny fitsaboana. Manana andraikitra lehibe amin'ny famongorana ny elanelana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy ny media. Noporofoina mihoatra noho izany fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia mahay mitovy ary ilaina ny mampiditra ny vehivavy amin'ny siansa sy ny teknolojia, tsy amin'ny resaka fahamarinana na fitoviana fa ny fahombiazana sy ny fifaninanana.
Ahoana ny famatsiam-bola avy amin'ny Code.ORG amin'ny tetikasany maimaim-poana?
Avy amin'ireo mpamatsy vola anay, izay orinasan-teknolojia lehibe manerantany, ary koa ireo mpanao asa soa any Amerika Avaratra. Izahay tsirairay dia mitady loharanom-bola vaovao sy mpamatsy vola avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao satria tena tetik'asa eran-tany izahay.
Inona no fiantraikan'ny fiteny roa eo amin'ny teknolojia amin'ny fizarazarana nomerika ary amin'ny fomba ahoana no hiadiana amin'ny Code.ORG?
Misy fiantraikany tanteraka izany satria ny tsy fampifanarahana fiofanana amin'ny asa dia hiteraka tsy fahampian'ny matihanina, izay ho sarotra kokoa ny manarona. Misy fiatraikany amin'ny resaka asa, soa, fifaninanana ary famokarana. Tara amin'ny teny Anglisy isika ary tsy afaka mividy zavatra mitovy hitranga amintsika amin'ny alàlan'ny programa (sy fisainana computational).
Mihevitra ve ianao fa manana olana amin'ny famoronana, ny fisainana kritika ary ny famahana olana ny tanora ankehitriny?
Tsy manana angon-drakitra hamaliana an'io fanontaniana io aho. Saingy afaka miteny aho fa rehefa mandrafitra programa dia mieritreritra fisainana computational isika ary ity dia manome vahana ny fahaiza-manao andiany iray hafa toa ny lojika, fisainana mitsikera na famahana olana. Tsy fantatsika izay ho asan'ny ho avy, saingy fantatsika hoe inona ny fahaiza-manao takian'izy ireo ary, ankoatry ny hafa, ireo.
Raha hiverenana amin'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny zazavavy ve ny Code.ORG dia mikasa ny hanao hetsika na fampielezan-kevitra mifantoka amin'ity fankalazana manokana ity?
Tsy manokana satria manao fampielezan-kevitra tsy tapaka isika, satria ampahany amin'ny ADNntsika ny manampy tovovavy.
Inona araka ny hevitrao no mety hidiran'ny Code.ORG amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana?
Afrika ohatra dia kaontinanta misy mampiavaka manokana. Any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana dia miara-miasa amina fikambanana iraisam-pirenena izay miasa eo an-kianja izahay, izy ireo, miaraka amin'ny governemanta eo an-toerana, no mpiara-dia tsara indrindra amin'ireny jeografia ireny.
Misaotra ny ekipan'ny Code.ORG ary indrindra indrindra i Fran del Pozo tamin'ny fijerin'izy ireo sy ny famaliany ireo fanontaniana rehetra ireo tsy nisy fanoherana. Manantena izahay fa afaka manome ny anjarantsika amin'ny fanitarana ny programa amin'ireo zandriny indrindra indrindra manaparitaka ny sakana eo amin'ny lahy sy ny vavy amin'ny sehatra tsy tokony hananan'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Tovovavy ofisialy amin'ny Andro ICT: Miresaka amin'i Fran del Pozo izahay, avy amin'ny Code.ORG